विश्वकप फुटवलमा हार्नेलार्इ पनि पुरस्कार, हेर्नुस्-कसले कति पाउँछ ? « Janata Samachar
विश्वकप फुटवलमा हार्नेलार्इ पनि पुरस्कार, हेर्नुस्-कसले कति पाउँछ ?
प्रकाशित मिति : 12 June, 2018 2:42 pm
काठमाडाैँ । फिफाले विश्वकप फुटवलकाे पुरस्कार राशी बढाएकाे छ । फिफाले सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकप फुटबलमा भन्दा यसपटक समूह चरण बाहेक अन्य सबै तहकाे पुरस्कार राशी बढाएकाे हाे । गत संस्करणकाे बिजेता जर्मनीले ३ करोड ५० लाख डलर पुरस्कार पाएकाे थियाे । फिफाकाे अाधिकारिक वेवसाइटमा जनाइए अनुसार रसियामा हुन गइरहेकाे विश्वकप विजेता टाेलीले ३ करोड ८० लाख डलर पाउने छ । गतसंस्करणमा भन्दा यसपटक फिफाले ३० लाख अमेरिकी डलर बढाएकाे हाे । त्यस्तै प्रतियाेगितामा दोस्रो हुनेको पुरस्कार रकम पनि ३० लाख डलर नै बढाइएको छ ।
कसले कति पाउँछ पुरस्कार ?
फिफाकाअनुसार समूह चरण खेलेर बाहिरिने १६ टोलीले बराबर ८० लाख डलर पुरस्कार पाउनेछन् । याे चरणबाट १६ वटा टाेली अन्तिम १६ मा पुग्नेछन् । अन्तिम १६ बाट ८ वटा टोली क्वाटरफाइनलमा पुग्नेछन्, ८ वटा बाहिरिनेछन् । यो चरणबाट बाहिरिने ८ टोलीले प्रतिटोली १ करोड २० लाख डलरका दरले पुरस्कार पाउने फिफाले जनाएकाे छ । क्वाटर फाइनलबाट ४ टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्, ४ बाहिरिनेछन्। यो चरणबाट बाहिरने टोलीले प्रतिटोली १ करोड ६० लाख डलर पुरस्कार पाउनेछन् ।
यस्तै चौथो हुने टोलीले २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर पाउनेछ । तेस्रो हुनेले २ करोड ४० लाख डलर पुरस्कार हात पार्ने छ । भने उपबिजेता टाेलीले २ करोड ८० लाख पुरस्कार पाउने छ । याे वर्षकाे विश्व च्याम्पियन हुने टोलीले ३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहित १८ क्यारेट सुनको ट्रफी प्राप्त गर्नेछ ।